Nampiseho ny heriny koa ny baolina lavalava, ary nampahafantatra ny anaran’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny Makis, omaly tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Nomontsanin’izy ireo tamin’ny isa mavesatra 63 no ho3 ny Nizerianina.
Mbola eo hatrany ny lazan’ny tarika ‘Zay, tamin’ny fampisehoana nataony, omaly alahady tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Ny Tropy Lisin’Iarivo, nampiseho tantara iray nitondra ny lohateny “Noely taom-baovao”, tetsy amin’ny AFT Andavamamba.
Nafana tanteraka ny hetsika antsan-tononkalo sy famoaham-boky “ Tontolo poetika” niarahana tamin’ireo poeta avy ao amin’ny Vondron’ny korira kanton’ny haisoratra malagasy.
Efa misantatra sahady ny fanadiovana ny Tanàna ireo mpiara-dia amin’ny kandida laharana fahefatra. Nanala ireo peta-drindrina rehetra tsy ankanavaka.
Ny fokontany III G Hangara, nambolena voninkazo avokoa ny toerana nanariana fako teo aloha.
Fiara fitaterana nivarina teny an-tanimbary, tetsy Fenoarivo Ampitatafika,omaly alahady. Nampitohana tanteraka ny fifamoivoizana izany, ary talanjona avokoa ny nahita. Soa fa naratra fotsiny ilay tovovavy iray tao anatiny.
Sary: Fanou sy Tiana R